Rikoooo.com - Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
Nchịkọta ụlọ Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ
Nbanye na Ndebanye aha
Kedu ihe mere m jiri debanye aha?
Gịnị bụ COPPA?
Gịnị kpatara na enweghị m ike ịdebanye aha m?
M debara aha m ma enweghị m ike ịbanye!
Kedu ihe kpatara na agaghị m abanye?
Aha m aha n'oge gara aga mana enweghị m ike ịbanye ọzọ ?!
Efuola m paswọọdụ!
Gịnị kpatara m ga-eji pụọ ozugbo?
Gịnị ka “Hichapụ kuki” ahụ na-eme?
Mmasị onye ọrụ na ntọala
Kedu ka m ga-esi gbanwee ntọala m?
Kedụ ka m ga - esi gbochie aha njirimara m na ndenye aha ntanetị?
Oge ndị ahụ ezighi ezi!
M gbanwere timezone na oge ahụ ka dịkwa njọ!
Asụsụ m adịghị na ndepụta ahụ!
Kedu ihe onyonyo sochiri aha njirimara m?
Kedụ ka m ga-esi gosi avatar?
Gịnị bụ ọkwa m na otu m ga-esi agbanwe ya?
Mgbe m pịrị njikọ njikọ email maka onye ọrụ ọ jụrụ m ịbanye?
Kedu ka m ga - esi kee isiokwu ọhụrụ ma ọ bụ zipu azịza?
Kedu ka m ga - esi dezie ma ọ bụ hichapụ post?
Kedu ka m ga - esi tinye mbinye aka na post m?
Kedụ ka m ga-esi mebe ntuli aka?
Kedu ihe kpatara na agaghị m atụkwasịkwuo nhọrọ ntuli aka?
Kedu ka m ga - esi dezie ma ọ bụ hichapụ ntuli aka?
Kedu ihe kpatara na agaghị m enwe ike ịnweta mkparịta ụka?
Gịnị kpatara na agaghị m etinye mgbakwunye?
Kedu ihe kpatara m jiri nata ịdọ aka na ntị?
Kedụ ka m ga-esi wepụta posts na onye njikwa akụkọ?
Kedu bọtịnụ “Chekwaa” maka maka ikenye akụkọ?
Kedu ihe kpatara oji dị mkpa ka akwadoro ọkwa m?
Kedụ ka m ga-esi kọọ isiokwu m?
Formdị usoro na ụdị
Kedu ihe BBCode?
Enwere m ike iji HTML?
Gini bu ihe di n’ulo?
Enwere m ike biputere eserese?
Gịnị bụ ọkwa ụwa niile?
Gịnị bụ ọkwa?
Gịnị bụ isiokwu siri ike?
Kedu ihe bụ isiokwu akpọchiri?
Kedu ihe bụ akara ngosi isiokwu?
Onye ọrụ na Otu dị iche iche
Gini bu ndi ochichi?
Gịnị bụ ndị Moderators?
Kedu ihe bụ ndị ọrụ?
Ebee ka ndị ọrụ otu na kedu ka m ga-esi sonyere otu?
Kedụ ka m ga - esi abụ onye isi otu?
Kedu ihe kpatara ụfọdụ ndị ọrụ otu eji apụta na agba ọzọ?
Gịnị bụ “Ndi an-kpọ na-arụ ọrụ”?
Gịnị bụ “Ndị otu” njikọ?
Izi ozi nkeonwe
Enweghị m ike izipu ozi onwe!
M ka na-enweta ozi nzuzo achọghị!
Enwetara m ozi spamming ma ọ bụ okwu mkparị n'aka onye nọ na bọọdụ a!
Enyi na ndi iro
Gini bu ndi enyi m na ndi iro?
Kedụ ka m ga - esi tinye / wepu ndị ọrụ na ndepụta Enyị m ma ọ bụ ndị iro?
Kedụ ka m ga - esi chọọ otu mkparịta ụka?
Gini mere nyocha m n’aghachighi nsonaazụ?
Kedu ihe kpatara ọchụchọ m ji weghachi peeji efu??
Kedu otu m ga-esi chọọ ndị otu?
Kedu ka m ga - esi chọta posts na isiokwu nke m?
Ndenye aha na Ibe akwukwo
Kedu ihe dị iche na ibe edokọbara na ịdenye aha?
Kedụ ka m ga - edetu ma ọ bụ denye aha na isiokwu akọwapụtara.
Kedu otu m ga-esi debanye aha na nnọkọ akọwapụtara?
Kedụ ka m wepu ndenye aha m?
Kedụ ihe ndị agbakwụnye na-anabata na bọọdụ a?
Kedụ ka m ga -achọ mgbakwunye m niile?
Isi okwu phpBB
Onye dere bọọlụ a?
Kedu ihe kpatara na atụmatụ X adịghị?
Onye ka m kpọtụrụ gbasara nsogbu na / ma ọ bụ ihe gbasara iwu gbasara bọọdụ a?
Kedụ ka m ga-esi kpọtụrụ onye isi nchịkwa?
May nwere ike ọ gaghị, ọ dị n’aka onye na-ahụ maka kọmitii ịchọpụta ma ịchọrọ ịdebanye aha iji zipu ozi. Kaosinadị; ndebanye aha ga - enye gị ohere ịnweta atụmatụ ndị ọzọ anaghị adị ndị ọrụ ọbịa dịka ihe osise avatarị ịkọwapụta, ozi nkeonwe, email nke ndị ọrụ ibe gị, ndenye aha ndị ọrụ, wdg Ọ na-ewe obere oge iji debanye aha ya na-atụ aro ka ị mee otú ahụ.
COPPA, ma ọ bụ Iwu Nchedo Nzuzo Onlinemụaka n'ịntanetị nke 1998, bụ iwu dị na United States na-achọ weebụsaịtị nke nwere ike ịnakọta ozi sitere n'aka ndị na-erubeghị afọ 13 ka ha nwee nkwenye nne na nna ma ọ bụ usoro ọzọ nke nkwenye iwu nzuzo, na-enye ohere ịnakọta nke ihe omuma nke aka ya site na nwata n’ebughi ogo 13. Ọ bụrụ na ejighị n'aka ma nke a metụtara gị dị ka onye na-anwa ịdebanye aha ma ọ bụ na weebụsaịtị ị na-achọ ịdebanye aha, kpọtụrụ ndụmọdụ gbasara iwu maka enyemaka. Biko mara na phpBB Limited na ndị nwe bọọdụ a enweghị ike inye ndụmọdụ gbasara iwu ma ọ bụghị ebe a ga-akpọtụrụ maka nsogbu ọ bụla gbasara iwu, belụsọ dị ka akọwapụtara na ajụjụ "donye ka m kpọtụrụ maka mkparị na / ma ọ bụ ihe gbasara iwu gbasara iwu a ? ”.
O kwere omume onye isi bọọlụ akagbuola ndebanye iji gbochie ndị ọbịa ọhụrụ ịdebanye aha ha. Otu onye isi oche nwekwara ike machibidoro adreesị IP gị ma ọ bụ gbochie aha njirimara ị na-achọ ịdebanye aha gị. Kpọtụrụ onye nlekọta bọọdụ maka enyemaka.
Nke mbu, tulee aha njirimara na paswọọdụ gị. Ọ bụrụ na ha ziri ezi, mgbe ahụ, otu n'ime ihe abụọ nwere ike ịmewo. Ọ bụrụ na agbanyere nkwado COPPA ma kọwapụta ịnọ n'okpuru afọ 13 n'oge ndebanye aha, ị ga-eso ndụmọdụ ndị ị natara. Boardsfọdụ bọọdụ ga-achọkwa ka emee ka ndebanye aha ọhụrụ rụọ ọrụ, ma ọ bụ gị onwe gị ma ọ bụ onye nchịkwa tupu gị abanye logon; ozi a dị n’oge ndebanye aha. Ọ bụrụ na ezitere gị ozi-e, soro ntuziaka ahụ. Ọ bụrụ na ịnwetaghị email, ịnwere ike ịnye adresị email na-ezighi ezi ma ọ bụ onye na-ezigara spam zitere email ahụ. Ọ bụrụ na ijiri n’aka na adreesị ozi-e ị nyere ziri ezi, chọọ ịkpọtụrụ onye nchịkwa.
E nwere ọtụtụ ihe kpatara nke a nwere ike iji mee. Nke mbu, gbaa mbọ hụ na aha njirimara gị na paswọọdụ gị ziri ezi. Ọ bụrụ na ha dị, kpọtụrụ onye na-elekọta bọọdụ iji jide n'aka na amachibidoghị gị iwu. Ọ ga-ekwe omume onye nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ nwere njehie nhazi na njedebe ha, ọ ga-adị mkpa ka ha dozie ya.
O nwere ike bụrụ na onye nchịkwa ewepụla akaụntụ gị ma ọ bụ hichapụ ihe ụfọdụ. Ọzọkwa, ọtụtụ bọọdụ oge na-ewepụ ndị ọrụ na-edebanyeghị ogologo oge iji belata ogo nchekwa data ahụ. Ọ bụrụ na nke a mere, chọọ ịdenye aha ọzọ ma sonye na mkparịta ụka.
Atụla egwu! Ọ bụ ezie na enweghị ike iweghachite paswọọdụ gị, enwere ike ịhazigharị ya ngwa ngwa. Gaa na nbanye peeji ma pịa Echefuru m paswọọdụ. Soro ntuziaka ị ga-enwe ike ịbanye ọzọ n’oge na-adịghị anya.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na inweghị ike ịtọgharịa paswọọdụ gị, kpọtụrụ onye na-ahụ maka bọọdụ.
Ọ bụrụ na ịchọghị Cheta m igbe mgbe ịbanye, bọọdụ ga - eme ka ị banye n'ime oge ewepụtara. Nke a gbochiri onye ọ bụla ọzọ iji akaụntụ gị. Ka ị nọrọ wee banye, lelee Cheta m igbe n’oge nbanye. A naghị atụ aro nke a ma ọ bụrụ na ị nweta bọọdụ ahụ site na kọmpụta kesara, dịka ọba akwụkwọ, ụlọ ịntanetị intanet, ụlọ nyocha kọleji, wdg. Ọ bụrụ na ịhụghị igbe nlele a, ọ pụtara na onye isi nchịkwa ahụ nwere nkwarụ a.
“Hichapụ kuki” na-ehichapụ kuki ahụ site na phpBB nke na-eme ka ị bụrụ onye ezipụtara ma banye na bọọdụ. Kuki na-enyekwa ọrụ dị ka ịgụ nsuso ma ọ bụrụ na onye isi bọọdụ enyerela ya aka. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu nbanye ma ọ bụ na - apụ apụ, ihichapụ kuki bọọlụ nwere ike inyere gị aka.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ edebanyere aha, echekwara ntọala gị niile na nchekwa data. Iji gbanwee ha, gaa na Njikwa Ogwe njikwa gị; enwere ike ịchọta njikọ site na ịpị aha njirimara gị na peeji nke bọọdụ. Usoro a ga - enyere gị aka ịgbanwe ntọala na mmasị gị niile.
N'ime Ogwe njikwa njirimara gị, n'okpuru "Ọdụ Board", ị ga-ahụ nhọrọ ahụ Zoo ọnọdụ ịntanetị gị. Kwado nhọrọ a ma ị ga-egosi ndị ọrụ nchịkwa, ndị na-eme ntule na onwe gị. A ga-agu gị dịka onye ọrụ zoro ezo.
Ọ ga-ekwe omume oge egosipụtara si na oge ihe dị iche na nke ị nọ na ya. Ọ bụrụ na ọ dị otu a, gaa na Njikwa Ogwe njikwa gị wee gbanwee mpaghara gị ka ọ dabaa na mpaghara gị, dịka London, Paris, New York, Sydney, wdg. Biko mara na ịgbanwere oge ihu igwe, dịka ọtụtụ ntọala, ọ bụ ndị ọrụ edebanyere aha ga-eme ya. Ọ bụrụ n ’edenyeghị aha gị, nke a bụ oge dị mma iji mee ya.
O buru na ijiri n’aka na ịtọla oge ihe nga n’ụzọ ziri ezi ma oge ahụ ezighi, mgbe ahụ echekwara na elekere savaị adabaghị. Biko gwa onye nzizi ka o mezie nsogbu a.
Ma onye nchịkwa awụnyerela asụsụ gị ma ọ bụ onweghị onye sụgharịrị bọọdụ a n'asụsụ gị. Gbalịa ịrịọ onye nlekọta bọọlụ ma ha ga-arụnyere asụsụ ịchọrọ. Ọ bụrụ na asụsụ adịghị, nweere onwe gị imepụta nsụgharị ọhụrụ. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na phpBB® weebụsaịtị.
Enwere eserese abụọ nwere ike ịpụta tinyere aha njirimara mgbe ị na-elele posts. Otu n’ime ha nwere ike ịbụ onyonyo jikọtara na ọkwa gị, n’ozuzu ya n’ụdị kpakpando, ihe mgbochi ma ọ bụ ntụpọ, na-egosi ọkwa ole ị mere ma ọ bụ ọkwa gị na bọọdụ. Ihe ozo, dika o buru ibu karie, a maara ya dika avatar ma obu ihe puru iche ma obu ndi mmadu n’onwe ya.
N'ime Ogwe njikwa ọrụ gị, n'okpuru “Profaịlụ” ị nwere ike itinye avatar site na iji otu n'ime ụzọ anọ ndị na-eso: Gravatar, Gallery, Remote ma ọ bụ Bulite. Ọ dị n'aka onye na-ahụ maka ọrụ iji nyere avata aka na ịhọrọ ụzọ enwere ike isi mee avata. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iji avatars, kpọtụrụ onye na-ahụ maka bọọdụ.
Ọkwa, nke na-egosi n'okpuru aha njirimara gị, na-egosi ọnụ ọgụgụ nke ederede ịmego ma ọ bụ mata ụfọdụ ndị ọrụ, dịka ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ya na ndị nchịkwa. Na mkpokọta, ịnweghị ike ịgbanwe mkpụrụedemede nke bọọdụ ọ bụla ozugbo dị ka onye na-ahụ maka kọmitii setịpụrụ ya. Biko esogbula bọọdụ ahụ site na ikenye ekwesighi iji mekwuo ọkwa gị. Imirikiti bọọlụ agaghị anabata nke a na onye njikwa ma ọ bụ onye nchịkwa ga-agbadata ọnụ ọgụgụ post gị.
Naanị ndị ọrụ edebanyere aha nwere ike iziga ndị ọrụ ndị ọzọ ozi-e site na ụdị ozi-e wuru, ma ọ bụrụ na onye nchịkwa enyerela njirimara a aka. Nke a bụ igbochi ojiji adịgboroja nke sistemụ email site n'aka ndị ọrụ na-enweghị aha.
Iji bipute isi okwu na mkparịta ụka, pịa "Isiokwu Ọhụụ". Iji biputere azịza nye isiokwu, pịa “Zaghachi Post”. May nwere ike ịdebanye aha tupu ịnwee ozi. Ndepụta nke ikike gị na nzukọ ọ bụla dị na ala nke mkparịta ụka na ihuenyo isiokwu. Ọmụmaatụ: can nwere ike biputere isiokwu ọhụụ, Inwere ike biputere mgbakwunye, wdg.
Ọ gwụla ma ị bụ onye isi nchịkwa ma ọ bụ onye njikwa, ị nwere ike idezi ma ọ bụ hichapụ ihe ederede gị. You nwere ike idezi post site na ịpị bọtịnụ ndozi maka post dị mkpa, mgbe ụfọdụ, ọ bụ naanị obere oge ka emechara post ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ azaghachila post ahụ, ị ​​ga-ahụ obere mpempe ederede n'okpuru post mgbe ịlaghachi na isiokwu nke edepụtara oge ole edeziri ya yana ụbọchị na oge. Nke a ga - apụta ma ọ bụrụ na mmadụ azaghachi; ọ gaghị apụta ma ọ bụrụ na onye njikwa ma ọ bụ onye nchịkwa degharịrị ọkwa ahụ, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịhapụ ndetu banyere ihe kpatara ha jiri degharịa post ahụ na arụmọrụ nke ha. Biko mara na ndị ọrụ nkịtị enweghị ike iwepụ post ọ bụla ozugbo mmadụ zara.
Iji tinye mbinye aka na post ị ga-ebu ụzọ mepụta otu site na Ogwe njikwa gị. Ozugbo emere, ị nwere ike ịlele Gbakwunye mbinye aka igbe n’elu mpempe akwụkwọ ikenye iji tinye akara gị. Nwekwara ike ịgbakwunye mbinye aka na ndabara gaa na post gị niile site na ịlele bọtịnụ redio kwesịrị ekwesị na Ogwe njikwa njikwa. Ọ bụrụ na ịme otu a, ị ka nwere ike igbochi mbinye aka itinye na nke ọ bụla site na ịpị tinye akara mbinye aka n'ime mpempe akwụkwọ ikenye.
Mgbe ị na-ezisa isiokwu ọhụrụ ma ọ bụ dezie post mbụ nke otu isiokwu, pịa taabụ “Ihe Okike Mpempe” n'okpuru isi akwụkwọ mmado; ọ bụrụ na ịhụghị nke a, ịnweghị ikikere kwesịrị ekwesị iji mepụta ntuli aka. Tinye aha ma ọ dịkarịa ala nhọrọ abụọ na mpaghara kwesịrị ekwesị, na-ejide n'aka na nhọrọ ọ bụla dị na ahịrị dị na textarea. Younwekwara ike ịhazi ọnụọgụ nke nhọrọ ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ mgbe ha na-eme ntuli aka n'okpuru “Nhọrọ maka onye ọrụ ọ bụla”, oge a kara aka na ụbọchị maka ntuli aka (0 maka oge na-enweghị njedebe) na ikpeazu ka ịhapụ ndị ọrụ ịgbanwe votu ha.
Onye nhazi bọọlụ setịpụrụ oke maka ntuli aka. Ọ bụrụ n ’ị chee na ịchọrọ itinyekwu nhọrọ na ntuli aka gị karịa ego enyere gị, kpọtụrụ onye na-ahụ maka bọọdụ.
Dị ka ọ dị na post, ntuli aka nwere ike dezie ya site na akwụkwọ mmado mbụ, onye njikwa ma ọ bụ onye nchịkwa. Iji dezie ntuli aka, pịa ka edezie post izizi na isiokwu ahụ; nke a nwere ntuli aka nke metụtara ya mgbe niile. Ọ bụrụ na onweghị ntuli aka, ndị ọrụ nwere ike ihichapụ ntuli aka ma ọ bụ dezie nhọrọ ntuli aka ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ndị otu etinyelarị votu, ọ bụ naanị ndị modera ma ọ bụ ndị nchịkwa nwere ike dezie ma ọ bụ hichapụ ya. Nke a na-egbochi nhọrọ nke ịtụ vootu igbanwe n'etiti etiti site na ntuli aka.
Forfọdụ nzukọ nwere ike inwe oke na ụfọdụ ndị ọrụ ma ọ bụ otu. Iji lelee, gụọ, biputere ma ọ bụ rụọ ọrụ ọzọ ị nwere ike ịchọ ikikere pụrụ iche. Kpọtụrụ onye maara ihe ma ọ bụ onye nlekọta bọọdụ iji nye gị ohere ịbanye.
Enyere ikike itinye maka mgbakwunye na otu nnọkọ, otu, ma ọ bụ ntọala onye ọrụ. Onye isi oche nwere ike ghara ịhapụ ka e tinye mgbakwunye maka otu okwu ị na-eziga na ya, ma ọ bụ ikekwe naanị otu ụfọdụ nwere ike biputere mgbakwunye. Kpoo onye na-ahụ maka bọọdụ ma ọ bụrụ na edoghị gị anya ihe kpatara na ị nweghị ike itinye mgbakwunye.
Onye isi oche ọ bụla nwere usoro iwu nke ha maka saịtị ha. Ọ bụrụ na ị dara iwu, enwere ike ịdọ gị aka na ntị. Biko mara na nke a bụ mkpebi onye isi oche, na phpBB Limited enweghị ihe gbasara ịdọ aka ná ntị dị na saịtị ahụ enyere. Kpoo onye isi oche ma oburu na ejighi n'aka ihe mere eji nye gi ndumodu.
Ọ bụrụ na onye isi bọọlụ ahụ kwerela ya, ị ga-ahụ bọtịnụ maka ịkọ akụkọ na-esote post ịchọrọ ịkọ. Na ịpị nke a ga - eme ka ị gafee nzọụkwụ dị mkpa iji kọọ post.
Nke a ga - enyere gị aka ịchekwa draịva ndị a ga-edobe ma nyefee ya na ụbọchị na-esote. Ibugharị ihe edokwara echekwara, gaa na Njikwa Ogwe njikwa.
Onye isi oche nwere ike ikpebi na post dị iche iche na ntanetị ị na - ezigara ka ịchọ nyocha tupu ntinye. Ọ ga-ekwe omume na onye nchịkwa etinyela gị n’otu ndị ọrụ ọrụ akwụkwọ ozi ha chọrọ nyocha tupu nrubeisi. Biko kpọtụrụ onye nlekọta bọọlụ maka nkọwa ndị ọzọ.
Site na ịpị “njikọ isiokwu” njikọta mgbe ị na-elele ya, ị nwere ike “kagbuo” isi okwu ahụ n’elu peeji nke mbụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịhụghị nke a, mgbe ahụ isiokwu ịkpụpụ akpụ nwere ike ịnwe nkwarụ ma ọ bụ oge enyemaka n'etiti bumps erubeghị. Ọ ga-ekwe omume ịkụtu isiokwu naanị site na ịzaghachi ya, ka esi n'aka, gbasoo iwu ndị otu mgbe ị na-eme ya.
BBCode bụ ntinye pụrụ iche nke HTML, na-enye nnukwu njikwa usoro na ihe ụfọdụ na post. Onye nchịkwa nyere ojiji nke BBCode, mana enwere ike inwe nkwarụ na ọkwa ọ bụla site na mpempe akwụkwọ. BBCode n’onwe ya yikwara nke HTML, mana mkpado na-anọchi ya na braket ejikere [na] karịa <na>. Maka ozi ndị ọzọ na BBCode lee ntuziaka a enwere ike ịnweta ya na peeji nke mgbasa ozi.
Mba. Onweghi ike itinye HTML na bọọdụ a ma mee ka ọ bụrụ HTML. A ka etinyere ọtụtụ formatting nke enwere ike iji HTML HTML site na iji BBCode kama.
Ndị isi ojii, ma ọ bụ Emoticons, bụ obere foto nke enwere ike iji gosipụta mmetụta site na iji koodu dị mkpirikpi, dịka :) na-egosi obi ụtọ, ebe :( na-egosi obi mgbawa.Ha ga-ahụ ndepụta zuru ezu nke mmetụta uche n'ụdị ikenye. Gbalịa ịghara ịuseụbiga ya ókè. Ndị isi kọmịị nwekwara ike hazie oke ọnụ ole ị ga - eji mee ihe n'otu post ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịgụta ya.
Eeh, apuru igosi ihe onyonyo gi. Ọ bụrụ na onye nchịkwa ekwela ka ihe mgbakwunye, ịnwere ike bulite onyinyo ahụ na bọọdụ. Ma ọ bụghị ya, ị ga-ejikọ ihe onyonyo echekwara na sava weebụ enwere ike, dịka http://www.example.com/my-picture.gif. Gaghị ejikọ ya na eserese echekwara na PC nke gị (ọ gwụla ma ọ bụ sava ọhaneze ga - enweta ya) ma ọ bụ onyunyo echekwara n'azụ usoro nkwenye, dịka igbe akwụkwọ ozi ma ọ bụ yahoo, saịtị echedoro wdg. Iji gosipụta onyonyo a jiri akara ngosi BBCode [img].
Mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ nwere ozi dị mkpa na ị kwesịrị ịgụ ya mgbe ọ bụla o kwere omume. Ha ga-egosi n’elu elu nzukọ ọ bụla na n’ime Ogwe njikwa gị. Onye isi bọọdụ ahụ nyere ikike nkwupute ụwa niile.
Mgbasa ozi na-enwekarị ozi dị mkpa maka nnọkọ ị na-agụ ugbu a ị kwesịrị ịgụ ya mgbe ọ bụla o kwere omume. Anma ọkwa na-apụta n’elu peeji ọ bụla na nnọkọ ezigara ha. Dịka ọ dị na ọkwa zuru ụwa ọnụ, onye isi nchịkwa nyere ikike ọkwa.
Isiokwu siri ike dị n'ime ọgbakọ a gosipụtara n'okpuru ọkwa ọkwa naanị na peeji mbụ. Ha na-adikarị ezigbo mkpa n’ihi ya, ị kwesịrị ịgụ ya mgbe ọ bụla o kwere mee. Dị ka ọ dị na ọkwa na ọkwa zuru ụwa ọnụ, onye isi bọọdụ nyere ikikere isiokwu nnabata.
Isiokwu akpọchiri akpọchi bụ isiokwu ebe ndị ọrụ enweghị ike ịzaghachi ya ma nghoputa ọ bụla ọ nwere ejedebe na-akpaghị aka. Enwere ike igbochi isiokwu n'ihi ọtụtụ ihe ma edozi ya ma ọ bụ onye nhazi otu. Inwere ike ịkpọchi isiokwu nke gị dabere na ikikere nke onye isi oche nyere gị.
Akara ngosi akara bu ihe edeputara onyonyo nke edere na post iji gosiputa ihe di n’ime ha. Ikike iji akara ngosi isiokwu na-adabere na ikikere nke onye isi oche.
Ndị ọrụ nchịkwa bụ ndị arụmọrụ nwere ọkwa kachasị elu na-achịkwa ndị ọrụ niile. Ndị otu a nwere ike ijikwa akụkụ niile nke ọrụ ụgbọ, gụnyere mwube ikike, ndị ọrụ machibido ndị ọrụ, ịmepụta otu ndị ọrụ ma ọ bụ ndị na-ahụ maka nhazi, wdg, dabere na onye nchoputa bọọdụ ahụ yana ikike o nyere ndị ọrụ ndị ọzọ. Ha nwekwara ike nwee ikike nrụnye ọrụ zuru oke na ebe niile, ọ dabere na ntọala ndị setịpụrụ bọọdụ setịpụrụ.
Ndị na-eme ihe ndozi bụ ndị mmadụ (ma ọ bụ ìgwè dị iche iche) na-elekọta nzukọ maka ụbọchị ruo ụbọchị. Ha nwere ikike idezi ma ọ bụ hichapụ posts na mkpọchi, imeghe, kwagharia, hichapụ ma kewaa isiokwu ndị ha na-agbakọ. Na mkpokọta, ndị na - ahụ maka ihe na - eme ihe na - egbochi ndị ọrụ ịpụghị ma ọ bụ biputere ihe na - adịghị mma ma ọ bụ okwu mkparị.
Ndị ọrụ otu bụ ndị ọrụ nke na-ekewa obodo n'ime ngalaba nchịkwa ngalaba enwere ike ịrụ ọrụ. Onye ọrụ ọ bụla nwere ike iso n'ìgwè dị iche iche, a ga-ekenye onye ọ bụla ikike iche iche. Nke a na-enye ụzọ dị mfe maka ndị nchịkwa ịgbanwe ikike maka ọtụtụ ndị ọrụ n'otu oge, dị ka ịgbanwe ikikere onye njikwa ma ọ bụ nye ndị ọrụ ohere ịbanye na nnọkọ nzuzo.
Nwere ike ịlele otu ndị ọrụ niile site na “Njikọ otu” n'ime njikwa njikwa gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ isonyere otu, gaa n'ihu na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụghị otu niile nwere ohere imeghe. Mayfọdụ nwere ike ịchọ nnabata iji sonye, ​​ụfọdụ nwere ike mechie ma ụfọdụ nwekwara ike ịnwe ndị otu zoro ezo. Ọ bụrụ na ndị otu ahụ mepere, ị nwere ike isonyere ya site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ndị otu achọrọ nnabata iji sonye, ​​ị nwere ike ịrịọ isonye site na ịpị bọtịnụ Kwesịrị ekwesị. Onye ndu otu ọrụ ga-akwado arịrịọ gị ma nwee ike jụọ ihe kpatara ịchọrọ isonyere ndị otu a. Biko enyena onye isi otu nsogbu ma ọ bụrụ na ha ajụọ arịrịọ gị; ha ga enwe ihe kpatara ya.
A na-ekenye onye isi otu ọrụ mgbe ejiri kọmiti ewepụta otu ọrụ otu. Ọ bụrụ n’inwere mmasị ịmepụta otu ndị ọrụ, ihe mbụ ga-eme ka ịkpọtụrụ gị kwesịrị ịbụ onye nchịkwa; Gbalịa zipu ozi nkeonwe.
O kwere omume onye isi bọọlụ ikenye ndị otu otu ọrụ agba iji mee ka ọ dị mfe ịmata ndị otu a.
Ọ bụrụ n ’ịnọ n’otu nzukọ ọrụ ihe karịrị otu, a na-eji ndabara gị iji chọpụta agba otu na otu o kwesiri igosi gị n’onwe ya. Onye isi na-ahụ maka bọọdụ nwere ike inye gị ikike igbanwe njirimara ndabara gị site na njikwa njikwa gị.
Peeji a na-ewetara gị aha ndị ọrụ bọọlụ, gụnyere ndị isi nchịkwa na ndị na-ahụ maka ndị isi na nkọwa ndị ọzọ dị ka nzukọ ndị ha na-arụ ọrụ.
E nwere ihe atọ kpatara nke a; ịdebanyeghị aha na / ma ọ bụ ịbanye, onye na-ahụ maka ọrụ bọọlụ egbochila ozi nkeonwe maka bọọdụ ahụ dum, ma ọ bụ onye na-ahụ maka bọọdụ gbochiri gị izipu ozi. Kpọtụrụ onye na-elekọta bọọdụ maka ozi ndị ọzọ.
Nwere ike ihichapụ ozi nzuzo sitere na onye ọrụ na-akpaghị aka site na iji iwu ozi dị n'ime Ogwe njikwa gị. Ọ bụrụ na ịnata ozi nzuzo dị iche iche site na otu onye ọrụ gị, kọọrọ ndị ahụ ngbanwe ozi ahụ; ha nwere ikike igbochi onye ọrụ izipu ozi nkeonwe.
Ọ dị nwute na anyị nụrụ nke ahụ. Njirimara ụdị email nke bọọdụ a gụnyere ihe nchekwa iji nwaa ma soro ndị ọrụ zitere ụdị posts a, yabụ zitere onye isi nchịkwa ụlọ ọrụ otu ozi email ị nwetara. Ọ dị ezigbo mkpa na nke a gụnyere ndị isi nwere ihe nkọwa nke onye ọrụ zitere email ahụ. Onye isi na-ahụ maka bọọdụ ahụ nwere ike ime ihe.
Can nwere ike iji ndepụta ndị a iji hazie ndị otu ndị ọzọ. A ga-edepụtara ndị agbakwunye na ndị enyi gị na ndepụta Njikwa njikwa gị maka ịnweta ngwa ngwa iji hụ ọkwa ha n'ịntanetị na iziga ha ozi nzuzo. Edebere nkwado nke ndebiri, ederede sitere na ndị ọrụ a nwekwara ike ịkọwapụta. Ọ bụrụ na i tinye onye ọrụ na ndepụta ndị iro gị, ihe ọ bụla ha mere ga-ezo na ndabara.
Can nwere ike itinye ndị ọrụ na ndepụta gị n'ụzọ abụọ. N'ime profaịlụ onye ọrụ ọ bụla, enwere ụzọ ịgbakwunye ha na Enyi gị ma ọ bụ ndị iro gị. N'aka nke ọzọ, site na Ogwe njikwa gị, ịnwere ike ịgbakwunye ndị ọrụ ozugbo site na itinye aha otu ha. May nwekwara ike wepu ndị ọrụ na listi gị site na iji otu peeji ahụ.
Tinye okwu ọchụchọ n’igbe ọchụchọ dị na ndeksi, mkparịta ụka ma ọ bụ peeji isiokwu. Enwere ike ịnweta ọchụchọ dị elu site na ịpị njikọ "Ọchụchọ Ọchọ" nke dị na ibe niile na ntanetị. Tozọ ị ga-esi nweta ọchụchọ ahụ nwere ike ịdabere n'ụdị eji eme ihe.
O nwere ike bụrụ na ịchọọ ihe gị siri ike ma jikọtara ọtụtụ okwu ndị a na-akọwaghị na phpBB. Gwakwuo gị nke ọma ma jiri nhọrọ ndị dịnụ na ọchụchọ dị elu.
Ọchịchọ gị weghachiri ọtụtụ nsonaazụ maka onye webserver ịme. Jiri “ọchụchọ dị elu” ma kpọọkwuo nke ọma na okwu eji na nzukọ a ga-achọ.
Gaa na peeji nke “Ndị otu” wee pịa njikọ “Chọta onye otu”.
Enwere ike weghachite ederede nke gị site na ịpị njikọ "Gosipụta posts gị" n'ime njikwa njikwa njirimara ma ọ bụ site na ịpị njikọ "Search onye ọrụ" site na ibe profaịlụ nke gị ma ọ bụ site na ịpị menu menu "ngwa ngwa". iba. Iji chọọ isiokwu gị, jiri peeji ọchụchọ dị elu ma jupụta ọtụtụ nhọrọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Na phpBB 3.0, isiokwu ntinye akwụkwọ arụ ọrụ dịka ibe edokọbara n'ime ihe nchọgharị weebụ. Egosighi gị mgbe enwere mmelite. Dị ka nke phpBB 3.1, ntinye akwụkwọ ntanetị dịka ịdenye aha na isiokwu. Nwere ike ịgwa gị mgbe emelitere isiokwu edokọbara. Subsdenye aha, agbanyeghị, ga - agwa gị mgbe enwere mmelite na isiokwu ma ọ bụ nwee nnọkọ na bọọdụ. Enwere ike ịhazi nhọrọ ngosi maka ibe edokọbara na ndenye aha ya na Ogwe njikwa onye ọrụ, n'okpuru "mmasị Board".
Nwere ike ibe edokọbara ma ọ bụ denye aha na isiokwu akọwapụtara site na ịpị njikọ dabara adaba na menu “Isiokwu akụrụngwa”, dị mma ịnọ n'akụkụ isi na ala nke mkparịta ụka.
Lyingzaghachi isiokwu na “gwa m mgbe ezighachiri azịza” ga-edenye gị aha isiokwu ahụ.
Iji denye aha na otu nzukọ a, pịa bọtịnụ “Kenye Aha Maka,” na ala nke ibe, mgbe ịbanye na nnọkọ ahụ.
Iji wepu ndenye aha gị, gaa na njikwa njikwa njikwa gị ma soro njikọ nke ndenye aha gị.
Onye isi oche ọ bụla nwere ike ikwe ma ọ bụ gbochie ụfọdụ ụdị mgbakwunye. Ọ bụrụ n’ arejighi n’aka ihe enyere ohere ka ewebata, kpọtụrụ onye isi ndị otu maka enyemaka.
Iji chọta ndepụta nke mgbakwunye ndị ị webatara, gaa na Ogwe njikwa gị ma soro njikọ nke ngalaba mgbakwunye.
Eweputara ngwanro a (n’edighi ya ede), nweputakwa ma nwebiisinka Siri ike phpBB. Enyere ya n'okpuru GNU General Public License, ụdị 2 (GPL-2.0) ma enwere ike kesaa ya. Lee Banyere phpBB maka nkọwa ndị ọzọ.
Edere ya na ikike ikike a site na phpBB Limited. Ọ bụrụ n’ikwere na ọ dị mkpa ịgbakwunye otu atụmatụ, biko gaa na phpBB echiche Center, ebe ị nwere ike ịkwalite echiche ndị dị adị ma ọ bụ tụọ atụmatụ maka ọhụụ.
Onye ọ bụla n’ime ndị nchịkwa edepụtara na ibe “Otu” kwesịrị ịbụ ebe kwesịrị ekwesị ịkpọtụrụ maka mkpesa gị. Ọ bụrụ na nke a ka enweghị nzaghachi, ị ga-akpọtụrụ onye nwe ngalaba ahụ (mee a onye anya) ma ọ bụ, ọ bụrụ na nke a na-arụ ọrụ na-akwụghị ụgwọ (dịka Yahoo !, free.fr, f2s.com, wdg), ngalaba nchịkwa ma ọ bụ mmegbu nke ọrụ ahụ. Biko mara na phpBB Limited nwere enweghị ikike ọ bụla ọnweghị ike ijide ya n'ụzọ ọ bụla, maka ebe ma ọ bụ onye ejiri bọọdụ a. Emela kpọtụrụ phpBB Limited n'ihe gbasara iwu ọ bụla (kwusi ma kwụsị, ịkwụ ụgwọ, ikwu okwu nkwutọ, wdg). enweghị ihe jikọrọ ya gaa na webụsaịtị phpBB.com ma ọ bụ sọftụwia discpBB n'onwe ya. Ọ bụrụ n ’ime ozi email phpBB banyere ihe ọ bụla nke atọ Iji ngwanrọ a mgbe ị ga-atụ anya nzaghachi terse ma ọ bụ enweghị nzaghachi ma ọlị.
Ndị ọrụ bọọlụ niile nwere ike iji mpempe akwụkwọ "Kpọtụrụ anyị" ma ọ bụrụ na onye nchịkwa ngalaba ahụ nyeere ya aka.
Ndị otu kọmiti ahụ nwekwara ike iji njikọ "Ndị otu".